परपुरुषसँग श्रीमतीको यौनक्रिडा आँफैले देखेपछि … | भिडियो « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
परपुरुषसँग श्रीमतीको यौनक्रिडा आँफैले देखेपछि … | भिडियो
आफुभन्दा पनि बढि माया गरेकी श्रीमतीले परपुरुषसँग यौनक्रिडा गरेको अवस्थामा आफ्नै आँखाले देखेपछि प्रेमीलाई कस्तो होला ? यो कुरा कल्पना गर्दा समेत मनमा पत्थर प्रहार हुन्छ। यदि साँच्चै जीवनमा यस्तो भयो भने ??? कहिलेकाहिँ कसैलाई यस्ता घटना वास्तविकमै हुने गर्छ। नायक किशोर श्रेष्ठलाई पनि यस्तै भएको छ।
किशोरलाई वास्तविक जीवनमा नभएर चलचित्रमा यस्तो भएको छ। चैत्र २१ मा देशव्यापी रिलिज हुने नेपाली चलचित्र ‘डिभोर्स’को एक गीतमा किशोरलाई माथी उल्लेख भएजस्तै अवस्थामा पाईएको छ। बिहिवार ठुलोपर्दा डटकमबाट सार्वजनिक ‘मेरो मायालाई कुल्चेर …’ बोलको गीतमा किशोरलाई पानी भिज्दै पागल सरह सडकको पेटीमा देख्न सकिन्छ। आफ्नै श्रीमतीले परपुरुषसँग सम्बन्ध राखेको आफ्नै आँखाले देखेपछि किशोर मरेतुल्य छन्। यो गीतमा शब्द तथा संगीत बिशाल हुमागाईँ र स्वर प्रमोद खरेलको रहेको छ।
‘डिभोर्स’मा किशोर श्रेष्ठ, बिनिता रम्तेल, आभास अग्रहरी, प्रदिप ढकाल लगाएतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ। सानुकुमार महर्जनको द्वन्द्व, रोशन लामिछानेको सम्पादन तथा किरणराज थापाको कलर करेक्शन रहेको छ। मनिष पन्थले आफ्नो चौथो चलचित्र स्वरुप ‘डिभोर्स’ निर्देशन गरेका हुन्। श्रीनगर फिल्म्स प्रा.लि.को ब्यानरमा रोहित पुरी र मिन प्रसाद श्रेष्ठले यो चलचित्रलाई बनाएका हुन्। यो चलचित्रमा लेखन तथा छायांकन समेत निर्देशन पन्थकै रहेको छ।